ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ ကွန်ရက်နှင့် နိုင်ချုပ် တို့ ပူးပေါင်းသတင်းစာရှင်းလင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ ကွန်ရက်နှင့် နိုင်ချုပ် တို့ ပူးပေါင်းသတင်းစာရှင်းလင်း
ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များ ကွန်ရက်နှင့် နိုင်ချုပ် တို့ ပူးပေါင်း၍ အဓိကရုဏ်း ဒုက္ခသည်များ အား ကူညီပေးနေခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကို ဘားလမ်း city star ဟိုတယ် ၌ ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရှင်းလင်းပွဲတွင် နိုင်ချုပ်မှကိုညိုထွန်းနှင့် ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်များကွန်ရက်မှဦးဇင်း ဦးပြည်ကျော်တို့က မိတ္ထီလာ၊ ပဲခူး၊ ကြို့ပင်ကောက်အစရှိသောမြို့နယ်များတွင် ကူညီထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများပေး အပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ဒုက္ခသည်အချို့အား ရန်ကုန်သို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်း ကိစ္စများအပေါ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
This entry was posted on March 31, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← အကြမ်းဖက်သမားအများစုဟာ အစ္စလာမ္မစ်တွေဆိုတာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ဥရောပရဲတပ်ဖွဲ့ (Europol) ထောက်ပြ	ဒီမိုကရေစီကို ဖျက်ဆီးမည့်သူများ၊ အကြမ်းဖက်သမားများအတွက် နေရာမရှိ၊ →